बिदेसीयका श्रीमानका श्रीमतीहरु किन अर्कैसंग मोजमस्ती गर्छन् ? - Nepal News - Latest News from Nepal
By nepalnews	 On Jul 21, 2017
मलेशिया । जब एउटा प्रदेशी मिठो सपना बोकेर प्रदेश पसेको हुन्छ । आफ्नो प्राण भन्दा प्यारी प्रेमीका वा श्रीमती साथ मा बा–आमा र छोरा छोरीलाई छोडेर प्रदेशको भुमीमा आफ्नो पसिना र रगत संग लड्दै भविष्यको मिठो कल्पना गर्दै प्रदेशी दिनहरु बिताउँदै आएका छन् । रात दिन त्यही आफ्नो प्रेमीका वा प्राण भन्दा प्यारी श्रीमतीसंग बिताएका पलहरु कल्पना गरी पर्देशी भुमीमा आफ्ना दुस्ख सबै भुली दिन्छन ।
प्रदेशीले हरेक दिन आफ्नो पसिना रगत संग लुकामारी गरी पैसा कमाउँछन । बिचरा प्रदेशी मन मा चाहाँना हुदाहुदै पनि भविश्य सोची एक पैसा खर्च नगरी कमाएको हुन्छ । तर आज कल कस्तो जमाना खै कसरी भनु म संसार नै स्वार्थी र जाली भए पछि । त्यसैले आज चिच्याई चिच्याई भन्न मन लागेको छ मलाई । प्रेदेशीको पनि एउटा चाहाँना हुन्छ सपना हुन्छ ।
उसको पनि एउटा छुट्टै संसार बनाउँने सपना हुन्छ । तर सपना सपना मै सिमित रहन्छ केवल प्रेमीका वा श्रीमतीहरुले गर्दा । हे भगवान किन सोच्दैनन प्रदेश मा पसिना र रगतसंग खेल्दै पैसा कमाएको छ भन्ने ।
किन सोच्दैनन प्रदेशी जिन्दगीसंग खेलवाड गर्दा उसको मन दुख्ला भनेर ? कति धेरै सपना बुनेको हुन्छ धेरै पैसा कमाएर राम्रोसंग बसुला भनेर तर सोचेको भन्दा ठिक उल्टो भई दिन्छ बिचरा प्रदेशी दुःख गरेर कमाएको पैसा उता घरमा अर्कैसंग मोजमस्ती गरेर अर्कैसंग जाने गरेका छन् ।
त्यो पल कसरी सहन सकेको होला त्यो पर्देशीले किन सोच्दैन किन ? मनभरी संगालेका मिठा सपनाहरु भताभुंग पारेर जिउँदो लास सरी फेरी आफ्नै जन्मभुमी ठाउँ र बा–आमा र छोरा छोरी सम्झेर घर फर्केको हुन्छ । मैले पनि आज मेरी उनीलाई भन्दैछु मेरो जिन्दगी तिम्रै हात मा चाँहे बगार चाँहे सपार तिम्रो जिम्मा ।
९मलेशियामा काम गर्दै आएका एक नेपालीको दर्दानक सत्य भनाई नाम गोप्य राखिएको छ ।
फेसबुकबाट साथी बनाएर लाखौं रकम ठगी
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी आक्रोशस् बन्दुक नबोकेको प्रष्टीकरण कहिलेसम्म ?